Mourinho oo beeniyay inuu ku lug lahaa in Salah uu ka tago Chelsea – Gool FM
(Liverpool) 27 Abriil 2018 Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa iska fogeeyay eedeyn badan oo loo jeediyay kadib qaab ciyaareedka wacan ee Mohamed Salah.
Mourinho ayaa Chelsea keenay Salah 2014 markaas oo uu ka soo dhaqaaqay kooxda FC Basel, laakiin laacibka ayaa ku fashilmay inuu boos joogto ah ka helo Blues taas oo keentay in amaah loogu diro Fiorentina isaga oo kadib ku biiray Roma 2016.
Tababaraha reer Portugal ayaa iska fogeeyay inuu ku lug lahaa iibka Salah laakiin wuxuu ku faanay inuu ahaa qofkii kula taliyay Chelsea in la keeno weerar yahanka reer Masar.
“Dadka qaar waxay leeyihiin aniga ayaa iibiyay Salah, laakiin taas caksigeeda ayaa dhacday, waan soo iibsaday, waxaan ahay qofka kaliya ee u sheegay Chelsea inay lagama maarmaan tahay soo qaadashadiisa” ayuu yiri Mourinho oo is difaacaya.
“Aad ayuu u da’yaraa markii uu imaanayay Chelsea, jir ahaan iyo aqli ahaanba diyaar ma uusan ahayn, wax walba waa ay ku adkaayeen isaga, wuxuu doonayay inuu ciyaaro daqiiqado badan, sidaas darteed waxaan u dirnay Fiorentina halkaas ayuuna bilaabay inuu ku bislaado”.
“Kadib Chelsea waxay go’aansatay inay iska iibiso isaga, haddii ay dhahaan aniga ayaa iibiyay been ayeey sheegeen, aniga ayaa soo iibsaday waayo waxaan rumaysnaa inuu muhiim nooyahay”.
“Go’aankii lagu iibiyay ma ahayn mid aniga iga soo baxay, Willian iyo Hazard waa kuwaas jooga wali kooxda, in ciyaartoy la iibiyo si kuwo kale loo soo iibsado taas ma ahan go’aan masuuliyadeeda aan leeyahay”.
Benzema oo abaal marintaan kula tartamaya 3-laacib oo Faransiis ah